@RefúgioLazzoli - Rio Sagrado - Morrete - I-Airbnb
@RefúgioLazzoli - Rio Sagrado - Morrete
Morretes, Paraná, i-Brazil
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Cristiane
Isiphephelo saseLazzoli sisendaweni yasemaphandleni yaseMorretes. Indawo eyinhlanhla nje engama-500mts ukusuka ku-BR277, itiyela kuze kufike esangweni lokungena. Isiphephelo yindawo ethule enomoya womndeni phakathi kweHlathi lase-Atlantic elizungezwe uhlaza, umfula nezilwane. Inekhishi elihlanganisiwe negumbi lokuhlala elikhulu, i-TV, i-Wi-fi. Sinikeza izoso, ihhavini nesitofu sokhuni. indawo ilungele abantu abafuna ukuthula, ukuthula nokunethezeka, ukubalekela izindawo ezivaliwe kanye nokujaha kwansuku zonke.
Isiphephelo sisendaweni engamamitha ayizinkulungwane eziyi-17, umfudlana womfula udlula kwezinye izindawo zepulazi, izihlahla zezithelo nezimbali eziningi zikhona yonke indawo, ujabulele futhi uthathe uhambo esikhaleni.
Indlu inamamitha-skwele angu-140 wendawo yangaphakathi, kanye namamitha-skwele angama-40 we-balcony ejabulisayo. Ilungele ukufunda incwadi oyikhonzile kwenye yamanethiwekhi ethu.
Igumbi elihlanganisiwe elinekhishi elikhulu kanye netafula elivulekile lawo wonke amalungu endlu, linamakamelo okulala amathathu amakhulu, i-suite eyodwa. Kukhona abalandeli kuwo wonke amagumbi.
Sinikeza izoso nesitofu sezinkuni esimnandi.
Kukhona nedamu lokudoba, lapho ungadoba khona i-tilapia, i-lambari ne-trahira.
Njengoba kuyindawo yasemaphandleni, eduze nehlathi lendabuko kuvamile ukuba khona kwezinambuzane nezilwane ezinobuthi, njengoba kulindelekile emaphandleni.
Kunconywa ukuthatha i-repellent kanye noma amafutha omzimba (amafutha othando asebenza kahle kakhulu), sebenzisa izikhathi ezimbili kuya kwezintathu ngosuku.
Enye yezinto ezikhanga izivakashi esifundeni i-Rio Sagrado waterfall, imizuzu engu-15 ngemoto. Kudingeka ukhokhe imali yokungena engu-R$10.00, ngincoma kakhulu ukuvakasha. Indawo enhle emaphakathi nehlathi lase-Atlantic, amanzi aqabulayo kakhulu.
Olunye ukuvakasha engiluncoma kakhulu ukuvakashela enkabeni yeMorretes (20km), lapho ungathola izindawo zokudlela futhi udle ukudla okujwayelekile kwesifunda, i-barreado. Ngemva kwesidlo sasemini, buyela emuva esikhungweni somlando futhi ubone imisebenzi yezandla emihle.
Umgwaqo iGraciosa ungomunye okufanele uwubone.
Isiphephelo saseLazzoli siyindawo eyingqayizivele, ikwazi ukuhlanganisa indawo yehlathi lase-Atlantic nezinsiza zesifunda, sinemakethe, izithuthi zomphakathi kanye negalaji likaphethiloli.
Isikhungo seMorrete imizuzu engu-20 ngemoto, sinikeza izindawo zokudlela, ukudla okujwayelekile kwesifunda, imisebenzi yezandla, uhambo olufanele ukwenziwa. Kungaba uhlelo oluhle kakhulu ngenkathi uhlala endaweni yokukhosela.
Indawo iqashiswe iyonke, futhi yonke indawo ngeyokusetshenziswa ngokukhethekile izivakashi. Ukufinyelela kungena ngomgwaqo we-asphalt (onokukhanya kodwa kungenasignali yeselula) futhi, ngenxa yalesi sizathu, kunconywa ukuthi ufike emini.
Ngaphandle kwendlu enkulu ene-balcony enkulu, ngaphakathi kwesiphephelo kunezindlu ezintathu ezincane ezindala, okwamanje ezingasetshenzisiwe.
Indawo iqashiswe iyonke, futhi yonke indawo ngeyokusetshenziswa ngokukhethekile izivakashi. Ukufinyelela kungena ngomgwaqo we-asphalt (onokukhanya kodwa kungenasignali yeselula) fu…
Hlola ezinye izinketho ezise- Morretes namaphethelo